Gufgaf|Online एलिजाले दीपकको सिनेमा खेल्ने ?
एलिजाले दीपकको सिनेमा खेल्ने ?
गफगाफ -अभिनेत्री एलिजा गौतमको निर्माण तथा अभिनय रहेको सिनेमा अनुराग यो शुक्रबार देखि प्रदर्शनमा आउँदैछ । ऋषिराज धमलाको ब्यानरमा निर्माण भएको यहि सिनेमा मार्फत उनले डेब्यु गर्दैछिन् । एलिजा पहिलो सिनेमाको प्रदर्शन मिति नजिकिँदै गर्दा निकै नै नर्भस भएकी छिन् । उनलाई यो सिनेमा के होला ? कसो होला ? भन्ने डर छ । अहिले अनुराग सफल बनाउन प्रचारमा कुनै पनि कसर बाँकि राखिएको छैन । बुधबार मात्रै सिनेमाको माईकिङ गरेर काठमाण्डौ उपत्यकामा प्रचार गरिएको छ ।
तर यो सिनेमाको कारोबार जे जस्तो भएपनि उनी सिनेमा क्षेत्रमा निरन्तर अघि बढ्ने सोचमा छिन् । यो सिनेमा असफल भएपनि आफूले फेरि अर्को सिनेमा निर्माण गरेर राम्रो गर्ने र दर्शकको मन जित्न प्रयास गर्ने उनी बताउँछिन् । उता ऋषि धमला पनि उनको काममा साथ दिएर अघि बढेका छन् । उनले पनि यो सिनेमा असफल भएपनि एलिजाको लागि फेरि अर्को सिनेमा निर्माण गर्ने बताए । फर्सिनेटवर्ककको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यो सिनेमा असफल भएपनि आफूले अर्को सिनेमा निर्माण गर्ने बताएका छन् ।
उनले एलिजाको लागि फेरि अर्को सिनेमा बनाउने कुरा गर्दा एलिजाले ऋषिराजको ब्यानर भन्दा बाहिर रहेर काम गर्छिन् कि गर्दिनन् भन्ने प्रश्न गरियो । यस प्रश्नको जवाफमा उनले एलिजाले दीपक राज गिरीको ब्यानरमा किाम गर्ने बताएका छन् ।उनले साच्चिकै एलिजाले दीपकराजको सिनेमा खेल्ने योजना भएर बताएका हुन् या यत्तिकै कुराकानीलाई रोचक बनाउन बताएका हुन् त्यो भने समयले नै बताउनेछ । तर शुक्रबार देखि प्रदर्शनमा आउन लागेको सिनेमा अनुरागलाई भने हाम्रो शुभकामना छ ।